I-Nandrolone Propionate Izinto eziluhlaza Abavelisi kunye nabaNikezeli-abaMveliso
I-Nandrolone Propionate powder yenye yezonabolic-androgenic steroids ezinamandla kakhulu ezikhoyo kwimarike. Isetyenziswe ngabakhi-mzimba kunye nabagijimi ukuba bandise ubuninzi besisundu kunye nesigxina.
Ividiyo ye-Nandrolone Propionate Raw (7207-92-3)
I-Nandrolone Propionate Raw material (7207-92-3) Inkcazo
I-Nandrolone Propionate Raw impahla yenye yezona zinto ziyaziwa kakhulu zi-steroids ezijoyiweyo. Kuthenjwa kungenxa yokuba i-Nandrolone Propionate Raw impahla ibonisa imiphumo ebalulekileyo ye-anabolic ngeempembelelo ezincinci ze-androgenic. I-Nandrolone Propionate yinkomfa esebenzayo eyenza umgangatho, uzuzo olude oluhlala ixesha elide, oku kungenxa yesiqingatha-ubomi obuninzi beziyobisi (malunga neentsuku ze-8).
Izinto ze-Nandrolone Propionate Raw zisetyenziselwa isifo esingapheliyo, ukutshisa okukhulu, ngaphambi kokuba emva kokuvala ukuphulukana nokuphulukana kwe-osteoporosis, ngaphambi kwexesha kunye nokunyanzeliswa kwabantwana, nangomdlavuza wesifuba ongakwazi ukusebenza kakuhle umhlaza we-uterine uterine fibroids njl. Nandrolone Propionate ye-anemia, i-breast carcinoma, i-angioedema yefa, i-antithrombin III, i-fibrinogen engaphezulu, ukuhluleka kokukhula kunye ne-Turner's syndrome kunye ne-prophylaxis ye-angioedema yefa.
I-Nandrolone Propionate Raw material (7207-92-3) Suqobo
Igama lemveliso Nandrolone propionate Raw material
uhlobo Numama Anabolicus, Nor-Anabol, Nortesto, Norybol-19, Pondus, Testobolin
Inani leCAS 7207-92-3
I molecular Fi-ormula C21H30O3
I molecular WSibhozo 330.46
Ukuxuba Point 55-60 °
Indawo yokubilisa 453.6 ° C kwi-760 mmHg
I-Biological Half-Life ngeentsuku ze-8
umbala i crystalline emhlophe
Aukuguquka I-Nandrolone propionate I-Raw material isetyenziselwa isifo esingapheliyo, ukutshisa okukhulu, ngaphambi kokuba emva kokuvala ukuphulukana nokuphulukana kwe-osteoporosis, ngaphambi kwexesha kunye nokunyanzeliswa kwabantwana, nangenxa yomhlaza wesifuba ongenakusebenza ongenakunqanda uterine uterine fibroids njl.
Yintoni i-Nandrolone Propionate Raw material (7207-92-3)?
I-Nandro Nandrolone Propionate yenye yezona ziyazi i-anabolic steroids esetyenziswe ngabakhi-mzimba kunye nabagijimi ukwenzela ukwandisa amandla kunye ne-stamina. Uninzi lwabadlali bawasebenzisa le steroid ukuze bafumane ubuninzi bemisipha kunye namandla. Le steroid ininzi ifumaneka kwifomu ejoyiweyo.
I-a19-ne-anabolic androgenic. Kuye kwaguqulwa kancane ukuba kuveliswe utshintsho kwi-testosterone. Ngamanye amazwi, ngenye yeemveliso ze testosterone ezinefuthe elikhulu lee-anabolic kodwa ubuncinane be-androgenic. Yona isetyenziswa kakhulu njengoko le steroid iyanciphisa i-DHN ngelixa elinye i-steroid linciphisa i-DTH.
Imisebenzi yeNandrolone Propionate Raw (7207-92-3) isebenza
I-Nandrolone Propionate Raw material (i-7207-92-3) ithathwa njengento eninzi ye-steroid jikelele ukuba indoda isebenzise uNandro (i-Nandrolone Propionate Raw material) ixhaphake ngokuphindwe kane ukuya kwezihlanu ngeveki. Ngale mali, ukuguqulwa kwe-estrogen kuncinane kangangokuba i-gyno ayinayo ingxaki. Ukwakha umzimba, iNandro (Nandrolone Propionate Raw material) iyakwazi ukubandakanywa ngokufanelekileyo kwimibini yesibini kunye nokusika. Kulula esibindi, kwaye sikhuthaza ubungakanani obuhle kunye nokuqina kwamandla ngelixa kunciphisa amanqindi omzimba.
I-Nandrolone Propionate Raw material (7207-92-3) Isisombululo
I-Nandrolone Propionate ifumaneka kwifomu ejoyiweyo. Yingakho kuthatha ixesha elingaphantsi ukuxuba kunye nokusebenza. Kuthatha malunga ne-2 kwiiveki ze-3 ukuze zifumaneke. Ngoko kucetyiswa ukuba uyeke ukulawula i-Nandrolone Propionate i-twoto ezintathu kwiiveki phambi kokuba naluphina ukhuphiswano okanye umdlalo apho uvavanyo lokuhlola iziyobisi lungenzeka. Ngokweemfuno zokwelapha kwasetyenziswa njenge-100 ku-200mg ngeveki ukujongana ne-anemia nezinye izifo. Abanye abagijimi basebenzise malunga ne-300 ukuya kwi-400mg nganye ngeveki ukuba kubekho umphumo ongcono.
I-Nandrolone Propionate Raw material (i-7207-92-3) i-powder Sebenzisa
I-Nandrolone Propionate isetyenziswe ngabakhi-mzimba kunye nabagijimi ukunyusa amandla kunye nesigxina. Kwakhona kuboniswa ukuba unyango lwe-anemia, i-breast carcinoma, i-angioedema yefa, i-antithrombin ye-III, i-fibrinogen engaphezulu, ukuhluleka kokukhula kunye ne-Turner's syndrome kunye ne-prophylaxis ye-angioedema yefa.
Thenga i-Nandrolone Propionate Raw material (7207-92-3) esuka eBuasas.com